Efa manana Linux aho ... ankehitriny ahoana no filalaovako? | Avy amin'ny Linux
Efa manana Linux aho ... ankehitriny ahoana no filalaovako?
Hyuuga_Neji | | GNU / Linux, Games, soso-kevitra
Ireo malala-tsaina toa ahy dia manaiky hianjera amin'ny tontolon'ny GNU / Linux, nisy fotoana nanontaniantsika tena ity fanontaniana ity ary angamba miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana (ary rehefa mahazo traikefa isika), afaka mijanona tsy manontany tena amin'ny fomba filalaovana isika ... Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ireo vaovao vao nilalao, indrindra taorian'ny vaovao momba Steam sy ny fahatongavany amin'ny Linux; satria tsara foana ny manana sehatra hilalaovana, saingy indrisy misy lalao hafa maro izay tsy eo amin'ny lampihazo, ary ny sasany amintsika dia te-hilalao azy ireo amin'ny fotoana mety… eto isika!
Saika ny olona rehetra mahalala mpampiasa GNU / Linux no nandre fa «amin'ny Linux raha afaka milalao ianao»Ary saika fisaorana hatrany Divay, fa angamba tsy fantatr'izy ireo fa ny divay dia iray amin'ireo programa marobe misy mamela antsika hanahaka ny lalao Windows, satria izy ireo koa Lalao CrossOver y Cedega.
Tany am-piandohana dia tsy betsaka ny tsy fitovizan'izy ireo (Afa-tsy ny fanovana hafa momba ny interface na sary) fa rehefa mandeha ny fotoana dia samy naka ny làlany avy ny tetikasa tsirairay, nahatonga an'io fahasamihafana io ho lehibe kokoa. Ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia tsy ny "hanomboka hiady amin'ny hafa" fa ny hanome topy maso (ao anatin'ny fahitako manokana) ny tsirairay amin'izy ireo.
Divay Maimaimpoana tanteraka izany ary angamba izany no antony iray amin'ireo 3 fampiasan'ny lalaovinay indrindra, ankoatry ny ankamaroan'ny disto ankehitriny dia manome ny fahafaha mametraka azy ireo amin'ny mpampiasa azy.
Cedega Orinasa antsoina hoe TransGaming no mamolavola azy ary misy raha toa ka mandoa $ 25 USD ianao raha te hahazo famandrihana mandritra ny 6 volana.
CrossOver Amin'ny lafiny iray, novolavolain'ny CodeWeavers, mila fandoavam-bola $ 39.95 USD ianao fa miaraka amin'izany fandoavam-bola izany dia efa afaka manana ilay programa kely isika.
Divay y CrossOver Tsy amin'ny tontolo GNU / Linux ihany izy ireo, fa manana ny kinova ho an'ny Mac-OSX (satria ireo an'ny manzanita dia tia milalao indraindray koa), raha mivarotra zavatra antsoina i TransGaming Cider na zavatra mitovy amin'izany, izay efa toa ilay alika iray ihany miaraka amin'ny vozon'akanjo hafa fa manatanteraka ny tanjony amin'ny fomba mitovy.
CodeWeavers, ny orinasa ao ambadiky ny CrossOver manana kinova hafa miakatra amin'ny tanany, toy ny Crossover-Office. Na dia mahay maka tahaka lalao aza ny Crossover-Office, ny CrossOver Games no fampiharana tolo-kevitr'izy ireo hilalaovana, satria natao manokana ho an'ity izy ary manana tontolo iray fehezin'ny interface interface (GUI), izay ahafahan'ny mpampiasa manao ny «tavoahanginy» hitazonana ny fikirakirana samihafa an'ny divay ao aminy, izay midika fa ho toy ny fanitarana ny mety ho izy ihany koa satria mamela antsika hitahiry fikirakira maro hilalaovana lalao maro.
CrossOver Izy io dia manana fametrahana sary ary koa manolotra tranomboky izay misy ny damn / voatsoaka DirectX sy .Net. Ny fonosana fanampiny dia mora apetraka, izay mahatonga ny lalao hametraka somary haingana kokoa noho ny amin'ny Divay. Ho an'ny fanamboarana dia mampiasa fitaovana mitovy amin'ilay asehon'ny divay izy. CrossOver dia manana Databata misy ny tavoahangy rehetra, somary tsy feno ity tahiry ity; izay raha ny hevitro dia aleo kokoa raha mahay mampiasa DB's divay ary milaza hoe lalao iza no hiara-hiasa amin'i CrossOver.
Divay Izy io dia sosona mifanentana ahafahan'ny tontolon'ny GNU / Linux mihazakazaka fampiharana Windows. Tsy toy ny emulator mahazatra (izay tokony hiditra amin'ny fitaovana sy rindrambaiko), ny divay dia afaka miditra amin'ny trano famakiam-boky Windows ary mampandeha azy ireo hiasa ao anatin'ny Linux. Izany no mahatonga ny divay haingana kokoa noho ny emulator sy milina virtoaly hafa. Misy lalao maro be izay tohanan'ny divay, raha ny marina amin'ny tranokalan'ny tetikasa izy io dia mitahiry tahiry marobe amin'ireo lalao anohana sy tsy tohanana, ary koa torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hahatonga ny sasany amin'izy ireo hiasa tsara.
Ny divay koa dia manana fitaovana fikirakirana sary antsoina hoe «winecfg»Ary misy fitaovana manokana ho an'ny fikirakirana mpamily, haino aman-jery sns. Amin'ny alàlan'ny default, ity rindrambaiko ity dia tsy manolotra Frontend amin'ny fampiharana ny lalao, fa afaka mahita mandrakariva ny rindranasa sasany izay mety ho an'izany ianao, na raha tianao dia azonay atao ny mampandeha azy amin'ny console. Ny lalao izay mampiasa OpenGL dia tohanana ao anaty divay, eny na dia ny sasany izay mampiasa tranomboky DirectX izay hita ao amin'ny tranonkala. Ny zavatra .Net sehatra zavatra tsy mora apetraka amin'ny Divay, fa ny lalao izay maniry ireo zavatra ireo dia toa mandeha tsara. Azonao atao koa ny mampiditra zavatra kely fanampiny toa ny endri-tsoratra MS Corefont (misaotra ny script antsoina Winetrick izany dia alefa amin'ny tambajotra).
Cedega Izy io dia manana interface graphique somary matanjaka (araky ny hevitro ny matanjaka indrindra amin'ny 3) izay manana fitaovana maro hifaneraserana amin'ny sary, ny feo ary ny hafa. Izy io dia mifototra amin'ny kinova divay somary tranainy, izay efa somary lavitra lavitra ilay nanjary kaody divay tany am-boalohany. Lalao maro no mihazakazaka amin'ny divay fa tsy any Cedega. Cedega dia manohana ny OpenGL sy Directx ary nanampy fampifanarahana vitsivitsy tamin'ny divay sy CrossOver momba ny Directx. Iray amin'ireo fahalemen'ny Cedega ny fanohanany .Net satria saika tsy azo atao ny mametraka ireo tranomboky ireo ka mahatonga ny lalao izay miankina aminy tsy mandeha ao Cedega.
El Trasgaming tranokala misy tahiry lehibe lalao tohanan'ny Cedega, izay tsy misy afa-tsy amin'ireo mpampiasa mandoa famandrihana ihany. Amin'ny tranga sasany, na dia milaza aza ny BD fa mihazakazaka ny lalao na tsia; omena fanazavana fanampiny kely foana. Raha vantany vao tapitra ny fisoratana anarana dia manohy miasa ny fampiharana, izy io ihany no mamoy ny fanohanan'ny tahiry sy ny zavatra sasantsasany izay tsy misy afa-tsy amin'ireo mpamandrika.
Misafidy sehatra voafaritra
Mampalahelo fa tsy misy izay ambony lavitra noho ny sasany, ka ny iray amin'ireo vahaolana notenenin'ny olona tia lalao tamiko indrindra dia ny filozofia «raha te hampitombo ny haben'ny lalao windows ianao amin'ny pc ampiasao ny 3 rehetra«Raha ny marina dia mety miasa ho an'ny sasany io filozofia io, saingy amin'izao fotoana izao dia mijanona amin'ny 1 amin'izy ireo fotsiny aho.
Na dia mifototra amin'ny Divay aza, samy hafa ny fiasan'ny 3 rehetra ary samy manana ny tombony azo avy aminy; ohatra: ny DB tsara indrindra dia ny an'ny divay, raha ny fanampiana tsara indrindra amin'ny fametrahana fonosana kosa dia nomen'ny CrossOver, ary koa ny fanampiana tsara indrindra ho an'ny teknolojia Pixel Shaders dia nomen'ny Cedega. Ny lalao ao amin'ny Wine sy CrossOver dia mihazakazaka avy amin'ny menio ho an'ny mpampiasa ary ao Cedega kosa dia avy amin'ny fampiharana Cedega izy ireo.
Ny fampifanarahana amin'ny Windows ao anatin'ny tontolon'ny GNU / Linux dia tsy ho tsara indrindra velively, fa farafaharatsiny tsara tsara ny mahafantatra fa manana ireto vahaolana telo ireto izahay izay manampy antsika hamoaka ny hevitr'ireo fanehoan-kevitra hafa izay ao an-tsain'ny mpampiasa Windows: «Tsy tiako ny Linux satria tsy afaka milalao azy io".
Raha toa ahy ianao dia mbola manana sombina kilalao Windows vitsivitsy ary aleonao mampiasa Linux (tsy misy enta-mavesatra amin'ny fampiasana boot roa heny) dia fantatrao fa miaraka amin'ireo fitaovana ireo ianao dia afaka manao azy.
Ity misy Screen Print an'ny iray amin'ireo franchise Blizzard (World of Warcraft) nalaina tahaka tamin'ny Crossover amin'ny LXDE-ko.
World of Warcraft (WoW) nalaina tahaka tamin'ny LXDE
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Efa manana Linux aho ... ankehitriny ahoana no filalaovako?
Ny tsara indrindra, afaka fotoana fohy dia hanana etona miaraka amin'ny Command & Conquer ao amin'ny linux izahay.
Ka tsy ilaina ny divay sy ny sisa.
ilaina foana ny divay ... ankehitriny satria tsy nitazona azy intsony isika hilalao azy dia hafa fa amin'ny farany manantena aho fa tsy hamela tetikasa tsara toy ny divay mihitsy izy ireo
Tsy ny olona rehetra no mampiasa divay mba hilalaovana lalao, araka ny eritreretinao azy.
Tena marina ny anao, ny divay dia tsy zatra milalao lalao foana (nisy fotoana nampiasako azy hampiasa Photoshop fa rehefa hitako ny momba ny GIMP dia najanoko ny fanaovana azy)
Tonga koa Steam ho an'ny Linux.
Krim dia hoy izy:
Ny zavatra Steam dia vaovao tsara.
Ny manelingelina ahy dia ny hoe maninona no lafo be ny mpamorona amin'ny famoronana ny rindran-damosin'izy ireo? Fa inona ary, manorisory ny mitelina Windows fotsiny satria misy rindrambaiko azo alaina ho an'io sehatra io fotsiny.
Valiny tamin'i Krim
Na eo aza ny 3 volana nijanonako tamin'ny Linux, ary mpilalao gamer manontolo andro aho, heveriko fa fitaovana tsy tokony hampiasaintsika amin'ireto tanjona ireto ny divay, araka ny lazain'i Rots87, ny divay dia tokony hampiasaina amin'ny tanjona hafa, ho an'ireo izay te-hilalao izay miandry ny fahatongavan'ny etona na milalao ny lalao tsara misy amin'ny linux.
na dia vao zazavavikely aza aho dia critère manetriketrika ahy izany.
PS: Tsy te hiteny aho hoe tsy misy ilana azy ny divay, ny mifanohitra amin'izay, tsy hitako ny antony hampiasana azy io ho fitaovana filalaovana.
koa mba tsy hijanonanao amin'ny setroka famoizam-po dia misy Desura mpanjifa ho an'ny lalao toy ny setroka
Fandraisana anjara tsara, misaotra anao nampahafantatra anay ity pejy ity.
Mandehana ianao mividy xbox na mitovy aminy ary avelao ilay omby
Tsy isika rehetra no afaka mividy pc sy console, ka mitady hilalao mendrika amin'ny compus-ny isika.
Tsy izany koa. Misy olona tia milalao lalao tokana ary ho an'ny PC-Windows ihany io.
Ny vahaolana dia ny hampijanonan'ny mpandraharaha ny fikasihany ny orona ary hamoronana rindrambaiko miampita ifotony mba hahafahantsika misafidy malalaka ny sehatra safidintsika.
Mazava fa tsy mahalala momba ny lalao ianao, efa nanontany anao ve aho, afaka milalao Dota2, Aion, Artic Combat na World Wacraft ve ianao amin'ny xbox?
Tsy dia mpilalao gamer aho, fa taona vitsivitsy lasa izay dia te-hahatsiaro ny androko tamin'ny fiandohan'ity taonjato ity aho, rehefa nomena lalao bebe kokoa aho, ary nitantana ny Starcraft sy Age of empires niaraka tamin'i Playonlinux, fampiharana mifototra amin'ny Divay sy mifantoka amin'ny fizotran'ny lalao fanombohana, indrindra (fa koa ho an'ny fampiharana hafa), Windows. Tsy fantatro hoe hanao ahoana ny fivoarany amin'izao fotoana izao, fa rehefa nampiasaiko izy io dia nahatonga ahy ho mpinamana be noho ny divay.
Ankehitriny, rehefa te-hilalao aho, amin'ny ankapobeny indrindra dia miampanga Megaman miaraka amin'ny emulator Bsnes aho, hehe.
Tsy te-hanala baraka ilay lahatsoratra aho.
Saingy efa elaela izay ny tsy nisian'ny cedega intsony, ankehitriny dia nantsoin'izy ireo hoe gametree izy ireo, ny lalao crossover dia niaraka tamin'ny biraon'ny crossover sasany. Mila havaozina ny lahatsoratra mba tsy hiteraka korontana
Misaotra tamin'ny hevitrao…. Tsy dia fantatro loatra ny momba ireo làlan-kizorana ankehitriny ireo satria raha ny marina ... divay, Cedega ary Crossover no nampiasako tany amin'ny oniversite saingy tamin'ny fahatongavan'i Winetricks sy Winex (script hanatsarana ny traikefa filalaovana amin'ny divay) dia najanoko ny fampiasana ireo sehatra.
Nampiasa Cedega tao amin'ny Gentoo aho tamin'ny 2009 nilalao WoW. Nahafinaritra ahy izany, izay indraindray nanisy pixel ny minimap, saingy ok daholo ny zava-drehetra. Oh, ary tereo ny config.wtf hampiasa OpenGL.
Neji: soraty aho ho ozkar ao amin'ny cristal dot hlg dot sld dot cu.
Faly aho miaraka amin'ny SuperTuxKart hahahaha ary talohan'ny nilalao sauerbraten dia tsy dia tiako loatra ny lalao hahaha
Valiny tamin'i Wada
Nanome ahy fiheverana tsara kokoa momba ny fomba hanoroana hevitra ireo liana amin'ity lohahevitra ity aho.
Indraindray fotsiny aho dia milalao fa amin'ny console ... didy ary any no ahazoako. Tonga ny sasany izay mifindra amin'ny GNU / Linux mpilalao amin'ny lefitra saika tsy maniry tontolo sary, sy ny hafa mpilalao Nandritra ny fiainany rehetra rehefa tonga izy ireo dia nahazo phobia izay mampatahotra azy ireo mihoatra ny Doom.
Manampia Dosbox, sy ny lalao teratany, toa ny Quake Live avy amin'ny firefox na koa ny seranana ho an'ny Quake na ilay Doom taloha ary ny tohiny mifototra amin'ny sôkôla famonoana sy seranana hafa.
Mazava ho azy PlayonLinux izay manamora ny fametrahana lalao isan-karazany miaraka amin'ireo soratanany.
Ary raha manana solosaina matanjaka ianao, tsara kokoa raha manana karatra horonantsary Xen roa miaraka amin'ny VGA Passthrough miaraka amin'ny MS WOS ianao, noho izany dia hanana Linux TANANA VIRUSES ho rafitra lehibe indrindra ianao, ary hameno ny MS WOS mihodina tahaka ny 95% na mihoatra ny herin'ny milina, na dia 105% aza raha apetraka tsy misy antivirus raha oharina amin'ny fametrahana amin'ny antivirus - mihazakazaka ny antivirus avy amin'ny linux amin'ny fizarazarana MS WOS indraindray rehefa mizaha amin'ny Linux -
Mampalahelo fa mametraka Xen miaraka amin'ny VGA passthrough ianao dia tsy maintsy manana solosaina maoderina, saika ny I3 / i5 / i7 dia manohana azy sy ireo mandroso indrindra avy amin'ny AMD koa, saingy tsy maintsy jerenao izany.
Miandry ny ampahany faharoa amin'ilay lahatsoratra miaraka amin'ny soso-kevitra omenay, misaotra anao tamin'ny asanao.
Ity lahatsoratra ity dia toa famerenana (fandikan-teny maimaimpoana) an'ity hafa ity (farafaharatsiny hitako fifandrifian-javatra maro):
Nihevitra aho fa ilaina ny mitanisa an'io loharano io.
Raha ny tena izy, izao rehefa mijery azy aho, dia misy sary telo mitovy amin'ny roa (ny tena izy dia tokony horesahina ao amin'ilay lahatsoratra).
Ny olana amin'ireo fakana sary dia ahy ny hadisoako… rehefa tonga amina lohahevitra manokana aho dia manoratra izay eritreretiko aloha ary avy eo dia miteny amin'i San Google aho mba hampiseho amiko ireo sary tadiaviko ka tena azo inoana fa ireo ihany no fakana an'io . Na izany aza, io lahatsoratra tianao horesahina io dia miresaka momba io lohahevitra io ihany koa mba mety ho tafiditra ao anaty adihevitra ... indray misaotra anao tamin'ny hevitrao.
Nahagaga ahy tokoa ny valinteninao. Ny zava-nitranga dia zavatra mahagaga. Ireo lahatsoratra roa dia manana rafitra mitovy amin'izany, mizara pikantsary 3 izy ireo ary tena misy ny fehintsoratra mitovy amin'izany. Jereo ohatra iray:
Ny divay koa dia manana fitaovana fikirakirana sary antsoina hoe "winecfg" ary misy fitaovana manokana hanamboarana mpamily, haino aman-jery sns. Amin'ny alàlan'ny default, ity fampiharana ity dia tsy mampiseho Frontend amin'ny fanatanterahana ny lalao, fa afaka mahita foana ireo rindranasa azonao ampiasaina amin'izany ianao.
Ampitahao amin'izany ity:
Ny fitaovana fikirakirana sary an-tsary an'ny divay dia antsoina hoe “winecfg” (Fanamboarana divay), ary ao anatin'izany ny fitaovana hamaritana ireo mpamily, fanamafisana ny haino aman-jery, ny fikirakirana sary ary ny fampidirana birao. Amin'ny toerana misy anao dia tsy misy laharana voalohany na fametrahana lalao na fihazakazahana, fa misy kosa programa hafa ankolafy maimaim-poana izay afaka mihetsika toy ny lohalaharana.
Kisendrasendra foana izy ireo. Azafady ny tsy fahazoan-kevitra.
Torohevitra farany farany ao amin'ilay lahatsoratra. Ovao ny vidin'ny fandoavam-bola amin'ny lalao Cedega sy CrossOver. Ianao ihany no mametraka ireo izay hita ao amin'ilay lahatsoratra hafa ary efa lany andro izy ireo ;-).
Fantatrao namana, ho an'ny manaraka dia tsy maintsy mitanisa ny loharanon'ny lahatsoratra niankinao ianao hanoratanao ny anao, ary koa mitanisa ny loharanon'ireo pikantsary (raha tsy azonao atao ny mamorona azy amin'ny PC-nao).
Fa kosa, heveriko fa tokony ho nilaza izy fa fandikan-teny io ary mitanisa ny tranokala misy ilay lahatsoratra.
Heveriko fa tsy dia sarotra ny manoratra lahatsoratra momba ny divay, tsara kokoa noho ny manao dikanteny sy maka tahaka azy ireo ho anao
Tsy nanao fotoana fandikan-teny mihitsy aho, raha tsy izany dia hoentiko tany aminao toy izao ny lahatsoratry ny bilaogy: fandikana lahatsoratra X amin'ny tranonkala na aiza na aiza misy ahy, tsy iray amin'ireo te-hahazo tombony amin'ny asan'ny olon-kafa aho ary tahaka ny navaliko ny mpampiasa hafa … Nalaina tao amin'ny Google ny pikantsary ka raha avy amin'ilay lahatsoratra izy ireo dia miala tsiny indray.
… Amin'ireo programa marobe misy izay mamela antsika hanahaka ny lalao Windows.
Ny divay araka ny anarany dia tsy emulator http://en.wikipedia.org/wiki/Wine_%28software%29
Ankoatr'izay, raha tokony hiteny ianao fa maimaim-poana tanteraka ny divay, tokony ho nilaza ianao fa maimaim-poana tanteraka, toy ny fikasana nambaran'ny ekipan'ny fampandrosoana "Rindrambaiko maimaimpoana foana i Wine."
Manana fanontaniana aho, manana divay divay misimisy kokoa, afaka misy miteny amiko hoe trano famakiam-boky inona avy no apetrako ao amin'ny mpanampy winetricks mba hahatonga ny divay ho tonga lafatra amin'ny lalao? Inona no mitranga dia rehefa manokatra ny wizard winetricks aho dia miseho ny fizarana maromaro ary tsy fantatro izay hapetraka? sa afaka manao bilaogy momba an'io ianao?
Valio amin'i KANNON
Tsy dia tiako loatra ny mampiasa divay fa tsy nahita programa tsara kokoa noho ny ares ho an'ny Linux aho, ny tsy azoko dia ny antony tsy anaovana ny ares ho an'ny Linux raha 100% Open Source izany. Tsy tiako koa ny amule raha oharina amin'ny emule.
Gaara dia nampidina ny crossover tamin'ny 32 bit ve ianao tamin'ny farany? Raha tsy misy izany dia manomboka aho!
Alefaso amiko ny rohy amin'ny alàlan'ny mailaka (kzkggaara [@] desdelinux [.] Net) hampidinana azy avy eo hampakatra izany amin'ny .CU
Manana kinova taloha (6.0) amin'ilay crossover aho fa tsy ampiasaiko
eny, miaraka amin'ny Kubuntu 12.04 aho .. ary milalao Warcraft 3 (Dota) isan'andro aho ary milalao World of Warcraft… tsy maintsy ekentsika fa mirongatra ny tetik'i Wine…. Mbola mila manadio zavatra vitsivitsy izy ... saingy mamaha izy, taloha keliko nametraka iTunes tao amin'ny KDE-ko, tsy hisokatra 100% izany fa farafaharatsiny zavatra iray izany. Zavatra iray hafa nananako tamin'ny sakafo maraina tamin'ny andro hafa nananan'ny divay mandra-pahatongan'ny regedit izay misy windows, izaho izay: 0 rehefa novakiako izy hehe.
Frikilui (Luis) dia hoy izy:
Miarahaba antsika rehetra avy any Monterrey, NL Mexico,
Efa ela aho no nanaraka an'ity bilaogy ity (tsy nisoratra anarana) ary izao dia mila ny fanampianao aho; Eny, efa nanandrana distro be dia be aho tamin'ny fomba mivantana (tsy manomboka ny ubuntu 12, LMDE, Sabayon 9, Fedora, mageia 2) fa tsy misy manome ahy mifanentana tanteraka amin'ny sary na raha misy manome ahy haingam-pandeha 3D na 2D feno, ny sary dia izao misy horonantsary Ati Xpress 200m 128mb nizara taloha tamin'ny solosaina finday Compaq Presario V2615LA (V2000) taloha fa tiako XD, amin'izao fotoana izao dia manana Ubuntu 12.04 napetraka aho fa ny glxgears dia mampiakatra ahy 427 fotsiny ao anatin'ny segondra 5.0 = 85.242 FPS an'ny 50fps izay nampiakariny ho an'ny fanovana vitsivitsy izany i gogleando, raha ny Fedora sy ny lmde dia 50 fps fotsiny sy sabayon 120 fps fa sady tsy manome ahy ny hafainganam-pandeha na ho an'ny lalao tsotra toa ny super tux 2 malalako dia fantatro fa tsy nanohana an'ity sary ity intsony ireo amd-ati amin'ireo mpanara-maso vaovao Saingy araka ny ahitanareo azy dia kivy mafy aho ary tsy te-hidoboka intsony.
Mihevitra ny tenako ho olom-baovao amin'ny GNU / Linux aho, fantatro izany tamin'ny taona 90 tamin'ny satroka mena saingy tsy nijanona aho satria tsy nahafantatra ny feo ary niverina mba hahazo 98se XD
Ao amin'ny Ubuntu aho izao dia manana ny mpamily Gallium 0.4 ao amin'ny llvmpipe (LLVM 0x300).
Misaotra mialoha raha afaka manome fanampiana sy fialantsiny arivo aho raha tsy tokony apetraka eto ity fanehoan-kevitra ity.
Valiny tamin'i Frikilui (Luis)
Miala tsiny, misy distro izay atolotray na misy fanaingoana tokony hampihariko, tsy mampaninona ahy ny mampiasa ny terminal ary efa goglie be aho XD sao misy mangataka XD.
OK ,,, Mijanona miaraka amin'i LMDE XDD aho
Ahoana ny fiasan'ny WoW amin'ny Linux ankehitriny?
Tsy milalao lalao aho, fa misy namana iray izay manao sy maniry ny hifamadika amin'ny Linux sy Play, nefa tsy manana varavarankely kilasy faha-2.
Mila fitakiana be dia be ve ianao?.
reNIX: lohahevitra GTK3 vaovao miaraka amin'ny fomban'ny Android
HowTo: apetraho amin'ny Linux ny BlueGriffon